Kaominina Antananarivo : « Tsy mandray andraikitra amin’ny fanadiovana » -
AccueilSongandinaKaominina Antananarivo : « Tsy mandray andraikitra amin’ny fanadiovana »
30/12/2017 admintriatra Songandina 0
Mazava ny fanazavan’ny minisitry ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’afo (MEEH), Lantoniaina Rasoloelison, mahakasika ny fanadiovana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra, indrindra fa ny lakan-drano amin’izao fotoam-pahavaratra izao.
Nambarany mantsy fa toa manilika andraikitra ary mifanjàna amin’ny Fanjakana hatrany ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) amin’ny fanadiovana ireny lakan-drano eto an-drenivohitra ireny. “Andraikitry ny CUA ny fanadiovana ireny lakan-drano ireny ary izay tsy vitan’ny CUA ihany no ataon’ny Fanjakana. Tsy izay anefa ny zava-misy fa mbola miandry ny Samva sy ny Apipa hatrany ny kaominina”, hoy ny minisitra Lantoniaina Rasoloelison.
Marihina mantsy fa nidina ifotony nanadio ny Lakan-dranon’Andriantany misy ny La Réunion Kely iny ny teo anivon’ny minisiteran’ny Rano, ny alakamisy 28 desambra teo. Tamin’izany indrindra no nahitana fa miakatra ny rano amin’iny lakan-drano iny noho ny loto misavovona ka miteraka fahatsentsemana. Marihina fa tamin’ny alalan’ny asa-tana-maro na Himo niarahana tamin’ireo mponina eny an-toerana ny fanalana ny loto ary nohalalinina ihany koa iny Lakan-dranon’Andriantany iny.
Nambaran’ny minisitra ihany koa fa anisan’ny mahatonga ny tondra-drano manodidina an’iny faritra iny koa ny fisian’ireo fananganana fotodrafitrasa tsy manara-dalàna sy tsy nahazo taratasy fahazoan-dalana tamin’ny CUA. Noho izay indrindra, hentitra ny minisitra nilaza fa rehefa tsy nomen’ny kaominina alalana izy ireny, andraikitry ny kaominina ihany koa ny mandrodana ireny fotodrafitrasa tsy ara-dalàna ireny. “Rehefa tsy nomena fahazoan-dalana manorina dia tokony mandrodana azy ireny ny CUA fa tsy avela fotsiny amin’izao hitera-doza ho an’ny vahoaka sy ny mpiara-belona. Harodany avy hatrany ireo tsy manara-dalàna!”, hoy hatrany ny minisitra hentitra.
Ankoatra izay, anisan’ny mahatonga ny tundra-drano eny amin’ireo faritra iva maro eto an-drenivohitra ihany koa ny tsy fandraisan’andraikitry ny kaominina hatramin’izay. Voalaza fa tsy misy zava-bitan’ny CUA nandritry taona 2017. “Ny lalana tapitra potika sy samba avokoa, ny lakan-drano tapitra tsentsina. Hita amin’izany ny tsy fahaiza-mitantan’ireo mpitantana eo anivon’ny CUA”, hoy ireo mponina eny amin’iny faritr’i La Reunion Kely iny.
Nandritra ny fitsidihana no nanazavan’ny tale jeneralin’ny seranan-tsambon’i Tokyo amin’ny fahaiza-manaon’ izy ireo eo amin’izay lafiny ara-potodrafitrasa .Tsiahivina hatrany moa ny ezaka fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina hiarahana amin’ny firenena japonais, izay hanomboka ny taona 2018 ...Tohiny